Qaybta Alternative 1.What in Transfer File Android taagan?
Part 2.How Isticmaalka Android Transfer Alternative File u Mac?
Maxaad u baahan tahay Android Transfer Alternative File?
Transfer File Android waa barnaamij lacag la'aan ah Macintosh kombiyuutarada socda Mac OS X 10.5 iyo ka dib. Waxay ka caawisaa si ay u korto telefoonka Android ama miiska sida drive dibadda adag. Sidaas, waxaad isticmaali kartaa oo samayn iibsiga file ka Android inay Mac, iyo qeybsanaan ku xigeenka. Download Transfer File Android u Mac >>
Tan iyo Transfer File Android kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso iyo tirto faylasha telefoonka ah Android oo kiniin ah, waa maxay sababta aad ka heli mid ka mid kale? Barnaamij lacag la'aan ah sida ay tahay, Waa sahlan tahay in aad maamusho phone Android ama kiniin on Mac, laakiin waxa uu leeyahay khasaaro.
Kaliya la jaan qaada qalabka Android ordaya 3.0 Android ama ka dib.
Ma noqon kartaa isticmaalka marka aad ku rakibtay Samsung Kies on Mac.
Mararka qaarkood, waxaa ku guuldareysto in la ogaado Android phone ama kiniin.
Waa maxay Alternative si Transfer File Android taagan?
Khaati ka taagan Android File Transfer iyo raadinayso ee badiilka ah? Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka duwan taas oo awood badan Transfer File Android - Wondershare TunesGo (Mac) - darbo. Waxaa inta badan loo isticmaalo si aad uga habsami leh u maamuli lahayd telefoonka Android ama kiniin on Mac ama PC. Hoos waxaa ku qoran qaababka ay uga fiican yahay oo ka badan Transfer File Android.
Sida loo isticmaalo Android Transfer Alternative File u Mac?
Tallaabada 1. Download oo ay maamulaan Wondershare TunesGo on Mac
Riix badhanka Download hoose si aad u gashato this on Mac. Si Mac Connect qalab Android aad la cable USB ah. Qalab aad dhowaan la aqoonsan doono. Waxa maamula. Mac sidoo kale idin xusuusin doonaa Lugood orod. Orod Lugood sida laguu sheego. Markaas, waxaad arki doontaa TunesGo Wondershare lagu soo bandhigi doonaa guriga dhankiisa midigta oo ah Lugood.
Tallaabada 2. nidaameed Lugood in Android
Guji ka nidaameed tab si ay u muujiyaan guddiga u hagaagsan. Hubi maktabadda oo Dhan ama playlists soo xulay si ay u hagaagsan music, filimada iyo playlists ka Lugood in Android.
Tallaabada 3. Transfer Xogta laga Mac si ay Android
Waa hagaag, haddii aad wax badan oo sawiro, filimada, heesaha on Mac oo jeclaan lahaa in iyaga loo qadariyo ee aad taleefan Android ama kiniin ah, waxaad isticmaali kartaa software TunesGo in ay iyagoo aad ku dartid telefoonka Android ama kiniin.
Riix furan Android Finder windowto furan yahay suuqa kala Android Finder. Markaas, jiididda iyo hoos u files ka Mac ama Lugood in Android Finder si ay u gudbiyaan si aad telefoon Android ama kiniin.
Tallaabada 4. Transfer Faylal ay ka Android inay Mac / Lugood
Waa wax iska fudud in xogta laga telefoonka Android ama kiniin wareejiyo Mac ama Lugood. Just guji furan Android Finder windowto furan yahay suuqa kala Android Finder. Markaas, dooro aad files doonayo, oo guji xakameeyo. In wada hadal pop-up ah, guji dhoofinta si Mac ama dhoofinta in Lugood .
Connect Android inay Mac iyo Transfer Files
Best 3 iTuens Badeli kara ee Android
> Resource > Android > Best Alternative Transfer File Android u Mac